Fifidianana: Efa manomboka ny Hazakazaka | mandimby maharo
Ny momba ahy.
Oyo! Mitady fianarana izahay.
Fifidianana: Efa manomboka ny Hazakazaka
Posted on 29 November 2012 29 November 2012 by Mandimby Maharo
Ny 08 may 2013 no voalaza sy nankatoavina fa hanatanterahana ny fifidianana filoham-pirenena eto mafagasikara. Efa mandeha araka ny tetiandro izay nofaritan’ny Cenit araka izany ny asa mialoha io fifidianan io: eo y fanisana ny mpifidy mba ananganana lisitra vaovao, eo koa ny fnaovana sonia ireo fifanaraham-piarahamiasa sy fanohanana ara-bola ireo dingana anaovana izany, mandiha miadana koa ny fampianarana sy fanentanana ny olom-pirenena amin’y tokony andraisany anjara amin’ny fifdianana… Efa miisa 12 koa ireo nilaza fa hirotsaka ho fidina amin’io fifidianana io. Ka na dia mbola aty amin’ny faha-6 volana mialoha ny daty voalaza aza dia efa hita fa samyefa mihetsiketsika avokoa ireo antoko sy ireo hita fa hirotsaka amin’izany fifidianana izany:
3 taona ny Malagasy Tonga Saina,MTS, antoko tarihin’ingahy Rolland Ratsiraka. Nilanonana tetsy amin’ny kianjan’Antsahamanitra ity antoko ity nentina nankalazana izany omaly Alarobioa 28 novambra. Fampisehoiana sy fanentanan ataon’ny mpanakanto fata-daza no hita tao. Ankoatry ny fety dia nisy koa ny kabary politika sy filazalazana ny momba ny antoko izay voafehy ao anatin’ny foto-kevitra. Ity antoko ity izay nikarakara fifaninanan koa nandritra ny fotoana maro izay ka tamin’io koa no nizaraina ny loka tamin’izany.
Hankalaza ny tsingeritaona faha 20 nijorony koa ny Rassemblement pour le Parti social_Démocrate, RPSD. Any MAhajanga no ho tanterahina io fotoan-dehibe ion y 30 novambra ho avy izao. Nadia mbola tsy misy fanambaran,a mazava ny amin’ny izay ho ataony amin’ny fifidianana filoham-pirenena amin’ny taona ho avy io aza ity antoko ity dia inoana fa hibahana toerana mandritry izany fotoana izany ny resaka finolorana olona ho fidina na koa izay mety hanohanany olona. Ny azo antoka aloha dia hanoletra kandida amin’ireo fifidianan isam-parira izy. Izay rahateo no maha antoko politika azy.
“Napetraka ny fanamby, tratra ny tanjona.” Io no teny fanentanana ho entin’ny Fat Andry Rajoelina hitokana ny Hopitaly Manara-penitra sy ny Trano Mora any Antsiranana. Ny 01desambra ho avy izao no hotanterahana ity fitokanana zava-bita ity. Lanonana miaraka amin’ny mpanakanto malaza koa no ho hita any amin’iny faritra avaratry ny nosy iny. Toy izay efa fantatra dia hosarihana amin’io koa ny anaran’ireo izay mahazo izany trano mora izany. hisy koa noho izany ny kabary politika hamelabelaran’ny Fat ny tanjona izay tratrany sy hametrahany ny fanamby manaraka.
Efa mahazatra kosa ny mahita ny antoko mientana ho an’ny Demokrasia eto Madagasikara, MDM, mitety faritra mitondra fanazavana sy manao fanentanana. Mahazatra ity antoko iy koa ny fanoilorana fanampiana sy fanomezana tolotanana any ambaniravinkazo any. Tsy mbola fantatra koa ny ho fanoloran’ity antoko tarihin’ny minisitra Pierrot Rajaonarivelo ity olona ho kandida filoham-pirenena. Saingy rah any fahitan’ny mpanara baovao azy fia manana erijika ihany ity antoko ity hahazoana io toeran’ny filoha io. Manoloana ny fiovaovan’ny tontolo politika sy ny raharaham-pitarana mianjady manokana amin’ity mpitarika ity manokana nefa dia mbola misitrisitrika tsy sahy manao fanambarana izy. Ho hita eo ihany ny tohiny.
Raha tsy hilaza afa-tsy ireo isika dia hita soritra fa fampielezankevitra ankolaka avokoa ireo. Ny mahavarina nefa dia toa tsy sahy manao fanankianan ireo milaza fa mpanaramaso ny fifidianan. Ireto farany izay manana andraikitra mialoha ny fifidianana, mandritra izany ary aoriany. Fomba fanao hatrizay ka nidradradradrana fanovana nefa izao atao rehetra izao; fanaovana fety miaraka amin’ny mpanakanto, fizarazarana entana sy sakafo na vola, fitokanan zavabita mialohan’ny fifidianan… Ka raha mbola izany ihany no iainana eto dia azo lazaina fa maty momoka ny fanovana notakian’iro marivo salosana teto. Tsy fotoan’ny fifanomezantsiny intsony koa nefa izao fa ny fanarenana ny firenena izay nalatsaka ao anaty kizo no tokony imasoan’ny rehetra fa tsy izay hazarana seza, izay efa lany, no ihazakazahana.
Tags: fifidianana, politique, PropagandyCategories: politique
2 thoughts on “Fifidianana: Efa manomboka ny Hazakazaka”
Pingback: Ho aiza ary ny Fat? | mandimby maharo
Pingback: FIFIDIANANA:Mirotsaha izay sahy | mandimby maharo
Communicateur de formation, grande gueule, activiste sur tout et n'importe quoi. Amoureux de Madagascar et d'une fille sexy. Passionné de musique et de vidéo.